Ma qasab baa inaad 15 jir ahaatid si aad galma u sameysid? - Youmo
Ma qasab baa inaad 15 jir ahaatid si aad galma u sameysid?
Måste man vara 15 år för att ha sex? - somaliska
Waxaan maqlay waa inaad 15 jir ahaatid si aad galma u sameysid. Ma runbaa? Lama ogoleyn miyaa haddii aan galma sameeyay 15 jir ka hor?
May, maadan sameynin wax la reebay. Majira sharci dhahaaya waa inaad 15 jir ahaatid si aad galma u sameysid. Laakiin waxaa jira sharci dhigaaya iney mamnuuc tahay in galma uu la sameeya qof 15 jir ka weyn qof isla da’adaas 15 jir ka yar.
Ma jir wax sharci ah oo ka reebaaya dadka ka yar 15 sana jir iney galma sameeyaan. Waxaa jira sharci ilaalinaaya caruurta iyo kuwa qaan gaarka ah ee ka yar 15 sana jir in dadka waaweyn ay galma u isticmaalaan.
Waxaa sidoo kale mamnuuc ah in galmo lala sameeya qof aan ku rabin inuu kula sameeya. Da’adaada inta ay rabta haa ahaata.